मधेसलाई टुक्राउने अभिव्यक्ति दिदै हिड्नेहरु “देशद्रोही” हुन्। – Chakra Jwala
मधेसलाई टुक्राउने अभिव्यक्ति दिदै हिड्नेहरु “देशद्रोही” हुन्।
Posted on 28 Dec 2015 11 Feb 2017 by Chakra Bhandari
हज्जारौं वीरहरुको रगतले गर्दा नै आजको एकीकृत नेपाल बन्न पुगेको हो। विभिन्न समयमा गरिएका सन्धि सम्झौताले खुम्चिएको नेपाललाई देशीविदेशी तत्त्वहरुले अझै खुम्च्याउदै सिध्याउन खोज्दै छन्। कहिले माओवादी युद्धका नाममा त कहिले मधेस आन्दोलन, कहिले संघीयता त कहिले गणतन्त्रका नाममा देशलाई दिनप्रतिदिन कमजोर र अशान्त बनाउन खोजिएको थियो/छ। धार्मिक र जातीय सहिष्णु देशमा आज धार्मिक/जातीय कलहको बिज रोपिएको छ। यो वा त्यो नाममा विभिन्न जाति/समुदायलाई उत्तेजित पारिएको छ। भएभरका अन्तर्राष्ट्रिय नियम/कानुनहरुलाई जबर्जस्त यहीँ हाम्रै देशमा थोपरिएको छ।
भारतीय नागरिक राजेन्द्र महतोहरु कसरी “नेपाली मधेसी समुदाय”को अधिकारको लडाइ लड्ने नेता बन्न पुगे? देश विखण्डनको योजना बोकेर बिदेशी समर्थन सहित खुलेआम हिडेका सि.के. राउतहरुलाई किन “देशद्रोही”को अभियोग लाग्दैन? नेपाललाई “बहुराष्ट्रिय देश” भन्दै खुलेआम हिड्ने महन्त ठाकुरहरु किन कारबाहीको दायरामा आउदैनन्? कालोबजारीले जनता भोकभोकै मर्न थालिसके। पुरै एसियालाई उज्यालो बनाउने जलस्रोत हुँदा हुँदै पनि देश आज चरम उर्जा संकटबाट गुज्रिरहेको छ। बेरोजगार दर दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। आशा गर्ने कहिकतै ठाउँ छैन। यस्तो अवस्थामा पनि देशको लागि राजनीति गर्छौं भन्नेहरु के हेरेर बसेका छन्? यो सबै अवस्था देख्दा त लाग्छ, देशमा सरकार छ कि छैन?? देशको सर्बोच्च पदमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रालय फुटाउन मै ब्यस्त छन्, आफ्ना आसेपासे भर्ती गर्न मै आफ्नो अर्जुनदृष्टि दिदै छन्। एउटा मन्त्रालय फुटाउदा झन्डै ३ अर्ब भन्दा बढी देशलाई आर्थिक भार पर्छ। खै त यस विषयमा ओलीले सोचेको?? देश टुक्राउने विषयमा खुलेआम जनमत संग्रह गर्दै हिड्दा किन मौन छ सरकार? किन नियन्त्रणमा लिन सकेन वा किन “देशद्रोह”को अभियोग लगाउन सकेन? देशका बिरुद्ध बोल्दै हिड्नेहरु किन “देशद्रोही” होइनन्? के ओली “लेण्डुप दोर्जे” बन्दैछन्?
Tagged: Nepal Politics
Previous Post तपाईंको थर कसरी सुरु भयो? जान्नुहोस्।
Next Post आफ्नो पहिचान जान्न चाहनेहरुले पढ्नैपर्ने पुस्तक ‘पूर्वीय सभ्यता’